Iyo iPhone 7 garandi haifukidze kukuvara kwemvura | IPhone nhau
Isu tinoda kuverenga iyo yakanaka kudhinda iyo Apple inosanganisira pane ese ayo zvishandiso. Nenzira imwechete iyo iyo Cupertino kambani yaona zvakakodzera kuisa muJet Nhema modhi nekuda kwe "abrasions" inogona kumuka pane chishandiso, isu tinowanawo nhevedzano yekujekeserwa maererano neiyo iPhone 7 garandi., IPhone 7 inoputika uye kusagadzikana neguruva, asi isina mvura zvachose. Naizvozvo, Apple inosarudza kujekesa kuti iyo garandi haigone kuburitsa zvinogona kukuvara izvo chishandiso chinogashira nekuda kwemvura. Ndiri kureva kuti, yako iPhone iri kupenya nemishonga, asi iwe zvirinani kuti uzviongorore pachako, kana iwe ungazobuda mazviri.
Nenzira iyi, kunyangwe hazvo iyo iPhone 7 yagashira mune ayo ese akasiyana chitupa chakafanana neApple Watch Series 1, isu tinofanirwa kuchengetedza kungwarira kwakafanana pakurwisa kunogona kuitika zvinwiwa. Ichokwadi kuti inorwisa, hongu, asi iyo waranti haina kuvhara kukuvara kwemvura zvichaunza kusahadzika matiri kuti hazvingatitenderi kuti tizvishandise nerunyararo zvarunofanirwa kuita. Naizvozvo, kana iwe uri kugamuchira kufona kunaya, iwe ungangoda kubvunza kana uchifanira kuipindura kana kwete, kunyangwe uine chitupa chinoenderana.
Chinyorwa ichi tinogona kuiwana pazasi pe peji rekuratidzira reiyo iPhone 7 Uye haisi maitiro asina kujairika, takaona kuti makambani akadai saSony akange aramba kare zvishandiso pasi pewarandi izvo zvakakanganiswa nezvinwiwa, kunyangwe hazvo vakasangana nechitupa chinowirirana. Sezvo iye achiverengera mumwe watinoshanda naye.
Kana iwe ukaunza yakanyorova iPhone 7 kuApple Chitoro, iyo Genius inokuudza kuti iwe hausi kuinyorova zvakanaka.
Muchidimbu, kunyangwe hazvo danho iri risiri kuzokonzeresa kusagutsikana kukuru, sezvo iri nzira yakajairika mune iri mhando yechigadzirwa, Apple ingadai yakatora nhanho kumberi kuratidza kuti yayo SAT ichiri yakanyanya kunaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 garandi haifukidze kukuvara kwemvura, kunyangwe ichirwisa
Uye handifunge kuti unofanirwa kutsvaga tsoka nhatu dzekati. Foni ine cheki yekudzivirira mvura asi haina mvura nyangwe zvodii. Senge kana iwe ukanyorovesa Xperia Z usina kuisa mabutiro pairi (iyo mune iyo yechi7 haizove dambudziko) pakanga pasina vimbiso, kana iwe ukaisa iyo iPhone mumushini wekuwachisa, iwe uchapfuura kugona kwayo uye ucha itakura.
Ehe, iwe unoenda nechako chakanakisa kumeso kuApple wobva wati iko chete iko kuhotsira kwengirozi kwakamwaya uye ... vanofanirwa kuchichinja here? Handifunge kudaro.
Chero zvazvingaitika, ngatiregei kuwana chikuru kana, runhare runogona kupindurwa kana kuchinaya, sezvandave ndichiita neiyo yekutanga iPhone kubva 2007. Uye ini ndinogara munzvimbo inonaya zvishoma, asi sekunge ndisina ruzivo (hakusi kuwedzeredza, ndine shanduko mumotokari nekuti mumamita mazana matatu ndanyorova) uye ndashandisa runhare nerunyararo rwe pfungwa.
Ini ndinotenda kuti ichi chitupa chinofanira kutipa rugare rwepfungwa kana girazi rikawira patiri, kunyangwe rikanyudzwa zvishoma. Ini ndanga ndichitozviita kuma6 uye ndizvozvo. Unganai kuti mutore mifananidzo pasi pedziva? Ini ndicharamba ndichishandisa chifukidzo changu chekupupurira icho, asi isu hatishinga kuishandisa pamazuva ekunaya ...